Ny ‘Akoholahy Mivovo’ No Nampiasain’ny Governemanta Maleziana Ho Dokambarotra Hankalazana Ny Taonan’ny Alika Araka ny Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Ny ‘Akoholahy Mivovo’ No Nampiasain'ny Governemanta Maleziana Ho Dokambarotra Hankalazana Ny Taonan'ny Alika Araka ny Shinoa
Voadika ny 01 Marsa 2018 15:04 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Ελληνικά, Français, 한국어, বাংলা, русский, 简体中文, 繁體中文, English
Niarahaba ny Taonan'ny alika Shinoa miaraka amin'ny dokambarotry ny akoholahy maneno ny governemanta Maleziana. Sary nalaina tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Minisiteran'ny Varotra sy ny Fiaraha-miasa ary ny Fanjifana ao Malezia.
Niala tsiny ny Minisiteran'ny Varotra sy ny Fiaraha-miasa ary ny Fanjifana ao Malezia (KPDNKK) noho ny fampiasana ny sarin'akoholahy mivovo iray tao anatin'ny dokambarotra an-gazety mba hiarahabana ny firoboroboan'ny taonan'ny alika araka ny Shinoa.
Manana mponina Miozolomana maro an'isa i Malezia sady mampiroborobo ny firindran'ny fiarahamonina ao anatin'ny firazanana sy ny fivavahana isankarazany ihany koa izy. Tato anatin'ny taona vitsy anefa dia nitaky ny hampiharana ny fampianarana Isilamika ao amin'ny fitantanan-draharaha ireo mpitarika Miozolomana Maleziana hiringiriny.
Mihevitra ny olona sasany fa natao hisorohana ny fanompana ny Miozolomana sasany izay mihevitra ny alika ho tsy madio ny fampiasana ilay akoholahy mivovo ao amin'ny dokambarotry ny Taombaovaon'ny Shinoa manara-bolana. Maro noho izany ireo toeram-pivarotana lehibe no nanapa-kevitra ny tsy hanaingo trano amin'ny Taombaovao manara-bolana mba hisorohana ny fanafintohinan'ny Miozolomana sasany.
Ahitan'ny sasany taratra ny fifandonana ara-kolontsaina eo amin'ny Miozolomana sy ny Shinoa vitsy an'isa ilay dokambarotra. Nanakiana ny dokambarotra ho mamelona fisarasaraham-bazana sy manimba ny kolontsaina marolafy ao amin'ny fiarahamonina ny antoko mpanohitra Antoko Hetsika Demaokratika.
Namoaka fialantsiny betsaka tsy nisy fanazavana fanampiny ny minisitera izay milaza fa “fahadisoana ara-teknika” izany. Saingy tsy nanaiky ny fanazavana ny ankamaroan'ny mpisera, hoy ny fanehoan-kevitra iray,
Mila manana kolontsaina bebe kokoa na misokatra kokoa amin'ny fahatakarana ny kolontsain'ny hafa ity sampan-draharaha ity. Tena mahasanganehana tokoa izany ary asehon'ny departemantanareo ny tsy fahalalana. Akoholahy mivovo ve? Tena marina? Fa any amin'ny planeta inona no mivelona ny KPDNKK ???
Nampahatsiahy ny fihetseham-pon'ireo mpanara-maso maro i Mariam Mokhtar, mpanao matoandahatsoratra avy amin'ny seha-baovao tsy miankina iray Free Malaysia Today :
Na giazan'ny mpandala ny Islamista, na tsy avelan'ny mpanara-maso izay kamo hihetsika, ary tsy mino ny famakian-teny alohan'ny hamoahana lahatsoratra ny sampan-draharahantsika.
Mandritra izany fotoana izany, nihevitra ny mpisera Shinoa sasany fa fanesoana ny Praiminisitra ankehitriny Najib Razak izay nomena ny solon'anarana hoe “ilay akoholahy” ilay “akoho mivovo” satria mitovy amin'ny teny Putonghua hoe “Na-Ji” (那 雞) ny fanononana ny teny hoe Najib. Niresaka momba ny hevitry ny “akoho mivovo” ao amin'ny fiarahabany ny Taombaovao Manara-bolana noho izany ilay bilaogeran-dahatsary malaza “So I'm Jenn” .
Tsy vao voalohany izao ny resaka alika no niteraka adihevitra tao Malezia. Tamin'ny taona 2016, notakian'ny Departemantan'ny Fampandrosona Islamika Maleziana (Jakim) mba hanova ny anaran'ny “Bretzel dog” ho “Bretzel sausage” ny andiam-pivarotana bretzel . Tamin'ny volana Oktobra 2014, nikarakara ny hetsika “Te Hikitika Alika Aho” ny tanora mpikatroka Miozolomana iray Syed Azmi Alhabshi, mba hanoherana ny fadin'ny Miozolomana ary niafara tamin'ny fandrahonana azy ho faty izany. Noterena hialantsiny izy.
Mahatratra ny ampahefatry ny mponina ao amin'ny firenena ny Shinoa Maleziana. Koa satria handimby ny taonan'ny alika ny taonan'ny kisoa amin'ny herintaona dia toa ho sarotra ny hisoroka ny fifandonana ara-kolontsaina momba ny Taombaovao Manara-Bolana Shinoa . Saingy antenaina fa efa nahazo anatra momba ny maha-zava-dehibe ny fanajana ny kolontsaina marolafy ny manampahefana Maleziana.